Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Dhexmaray Ciidan Gaar Ah & Al-Shabaab.
Dagaal Dhexmaray Ciidan Gaar Ah & Al-Shabaab.
Wararka naga soo gaadhaya tuulada Mubaarak ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in ciidamo si gaar ah u tababaran oo Soomaali ah oo ay la socdaan ciidamo shisheeye ay hawlgallo ka fuliyeen, ayadoo iska hor imaad uu dhex maray ayaga iyo Al Shabaab.
Dagaalkan ayaa yimid ka dib markii ay ciidankaas oo watay laba diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca ku degeen meel aan tuulada ka fogeyn, ka dibna ay lug ku aadeen dhinaca tuulada.
Dadka deegaanku ku dhaqan ayaa saxaafada u sheegay inay in muddo ah maqlayeen rasaas iyo qaraxyo is xig xiga. Hay’adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa barteeda Twitter ku sheegtay in hawlgalkan lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan Al Shabaab.
Al-Shabaab ayaa war ka soo baxay wuxuu sheegay in “ay dhabbaha u galeen ciidamadaas oo ay ku sheegeen inay isugu jireen “Soomaali iyo Maraykan”, ka dibna uu halkaas dagaal culus ku dhex maray “ayaga iyo ciidankii weerarka soo qaaday”.
Waxay intaas ku dareen inay hayaan “meydadka laba askari”, laakinse ma aysan sheegin cidda ay u dhasheen. Dadka deegaanka ayaa iyaguna sheegay in ay arkeen labo meyd. Hay’adda NISA ayaa mar kale barteeda Twitter ku soo qortay inay dagaalka dib uga soo baxeen. Xaaladda ayaa iminka deggan, lamana hayo ilo madax banaan oo ku saabsan heerka uu gaadhsiisan yahay khasaaraha ka dhashay dagaalkan.